अर्थ/बजार – Page 68 – Sawal Nepal ||The Power of Information
कठमाडौं — फेसबुक, युट्युब, गुगल र इस्न्ट्राग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वार्षिक अबौं रुपैया आम्दानी गदै आएका छन्। विज्ञापन तथा व्यवस्थापन प्रवद्धनका नाममा सामाजिक सञ्जालको ठूूलो परिणाममा नाफा कमाइरहेपनि नियमितन हुँदा राज्यले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो सामाजि सञ्जाल फेसबुक इनले आफ्ना उत्पादन फेसबुक, हवाट्एप, इन्सटाग्राम र म्यासेन्जरबाट सन् २०१७ मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट प्रयोगकतर्ता
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा गिरावट, नेपालमा के होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर ओरालो लागेको छ । भाउ घट्न थालेपछि भारतको घरेलु बजारमा पेट्रोल र डिजेल सस्तिएको छ । तर, भारतबाटै तेल खरिद गर्ने नेपाल आयल निगमले दुई महिनाअघिकै मूल्यमा नेपाली उपभोक्तालाई पेट्रोल, डिजेल बिक्री गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ६५.९ डलर प्रतिब्यारेल कायम भएको छ । डेढ महिनाअघि कच्चा तेलको
संसारको सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल यहाँ पाइन्छ, एक लिटरको एक रुपैयाँ १४ पैसा
नेपालमा पेट्रोल–डिजेलको मूल्य निकै महँगो छ । हाम्रोमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य सय रुपैयाँ माथि छ । तर सुन्दा अचम्म लाग्ला संसारमा यस्ता पनि देश छन् जहाँ पेट्रोल निकै सस्तोमा पाइन्छ । १. संसारको सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल भेनेजुएलामा पाइन्छ । यहाँ एक लिटर पेट्रोलको मूल्य ०.०१ डलर अर्थात् एक रुपैयाँ १४ पैसा छ । २.
आज कति पुग्यो सुन चाँदीको भाउ ?
काठमाडौं–सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५८ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । दुई दिनदेखि यहि मूल्यमा सुनको कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुन भने प्रतितोला ५८ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यता चाँदीको पनि दुई दिन देखि एउटै मूल्यमा कारोबार भएको छ । चाँदी आज प्रतितोला
इन्धनको मूल्य घट्दैछ !
नवीन ढुङ्गाना । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक गत असोज १ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन ग¥यो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा हुने उतार चढाबसंगै नेपालमा पनि स्वचालित रुपमा इन्धनको मूल्य समायोजन गरिने प्रणाली अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य त्यती बेला बढेको थियो । जस अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टीतेलमा
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ५८ हजार ४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज बढेर बजारमा सुन प्रतितोला ५८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, आइतबार बजारमा चाँदीको मूल्य दश
नेपालमा पाईने निकै सस्तो यो कार, जुन कार राम्रो मोटरसाइकल किन्ने पैसामा थोरै थप्दा किन्न सकिन्छ
मारुती सुजुकीको लोकप्रिय कार मारुती अल्टो बजारमा उपलब्ध मध्येको सर्वाधिक रुचाइएको इन्ट्री लेवल कार हो । मारुती सुजुकीको आधिकारीक विक्रेता सिजी मोटोर्कपले ७९६ सीसीको मारुती सुजुकी अल्टो ८०० एसटिडीको मुल्य १६ लाख ३९ हजार तोकेको छ । अर्को मोडल मारुती सुजुकी अल्टो एलएक्सआईको मूल्य १८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ५ स्पिड
बढ्यो सुनको भाऊ, कति पुग्यो ?
साताको पाँचौं दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य दुई सय रुपैयाँले बढेको छ । बुधबार बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ५८ हजार २ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज बढेर बजारमा सुन प्रतितोला ५८ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । बुधबार तेजावी सुन प्रतितोला ५७ हजार ९ सय
अब नेपालमै ११ हजारमा कार किन्न पाईने ! यो ठाउँमा जानुहो
काठमाडौ । चीसो मौसम शूरु भएको छ । मोटरसाईकलमा चढ्दा चीसोले हैरान हुनु भएको छ । दुई पांग्रेको भर छैन हैन भन्ने आवाजको गुञ्जायस र बारम्बार अर्को जन्म पाएजस्तोगरी दुर्घटनाको संघारमा पुगेर आत्तिनुभएकोपनि होला । अब मोटरसाईकल छोड्नुहोस् । ११ हजारमा नै अब कार किन्न सक्नुहुनेछ । अधिकांश नेपालीको हैसियतले धान्ने चमत्कारीक योजना एनआईसी एसिया
काठमाडौं – सुनको भाउ आज तोलामा ४ सय रुपैयाँ घटेको छ । सुन आज तोलाको ५८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो तोलामा एक सय रुपैयाँ घटेर सुन तोलाको ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । डलरभन्दा भारतीय रुपैयाँ मजबुत हुँदा सुनको भाउ केही घटेको